अमेरिकी नागरिकता अन्तरवार्तामा बदलिएका ६ प्रश्नको जवाफ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी नागरिकता अन्तरवार्तामा बदलिएका ६ प्रश्नको जवाफ
प्रकाशित मिति : माघ १७, २०७३ सोमबार
यदि तपाई अमेरिकी नागरिकताका लागि अन्तरवार्ताको तयारी गरिरहनुभएको छ भने तपाईले अवश्य पनि अन्तरवार्ताम आउनसक्ने सम्भावित प्रश्नोत्तर पढिरहनुभएको होला । तर याद राख्नुहोस्, अहिले त्यस्ता प्रश्नहरुमध्ये ६ वटा प्रश्नहरुको जवाफ पहिलेको भन्दा फरक भइसकेको छ । ती ६ वटा प्रश्नको जवाफ तपाईले पुरानो प्रश्नोत्तर सुचीका आधारमा दिनुभयो भने तपाई अन्तरवार्तामा अनुत्तिर्ण हुनसक्नुहुनेछ ।
२० – तपाईको राज्यको सिनेटरमध्ये एकजनाको नाम भन्नुहोस् ।
यो प्रश्नको जवाफ गत जनवरी ३ पछि बदलिएको हुनसक्छ । त्यसको लागि तपाईले सिनेट डट गभमा गएर तपाईको राज्यको सिनेटर पत्ता लगाउनुहोला । न्युयोर्कको सन्दर्भमा चाल्र्स शुमेर र क्रिस्टेन ग्लीब्राण्ड सिनेटरहरु हुन् । उनीहरु डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट सिनेटर हुन् ।
२३ – तपाईको क्षेत्रका एकजना हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभको नाम भन्नुहोस् ।
यो प्रश्नको जवाफ गत जनवरी ३ पछि बदलिएको हुनसक्छ । त्यसको लागि तपाईले हाउस डट गभमा गएर तपाईको क्षेत्रबाट युएस हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ पत्ता लगाउनुहोला ।
२८ – अमेरिकाका बर्तमान राष्ट्रपतिको नाम के हो ?
डोनाल्ड जे ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, ट्रम्प
२९ – अमेरिकाका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको नाम के हो ?
माइकल आर पेन्स, माइक पेन्स, पेन्स
४३ – तपाईका राज्यका गर्भनरको नाम के हो ?
यसको जवाफ पनि पदस्थापन मिति अनुशार बदलिएको हुनसक्छ । तपाईले अपडेट गरिएको जवाफ दिनुपर्छ । न्युयोर्कको सन्दर्भमा एन्ड्रयु कुमो राज्यका कभर्नर हुन् । तपाईका राज्यको गभर्नर पत्ता लगाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
४६ – वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिको राजनीतिक दलको नाम के हो ?
अमेरिकी नागरिकताको अन्तरवार्तामा सोधिने अमेरिकी सरकार र इतिहासबारेका १ सय प्रश्नहरु र जवाफका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला । अन्तरवार्तामा यीनै एकसयमध्येबाट १० वटा प्रश्नहरु सोधिन्छ । त्यसमध्ये तपाईले ६ वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनैपर्छ ।